အာမေးနီးယားရှိ LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း - အာမေးနီးယားရှိလီဗာပူးလီမိတက်လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
သင်အာမေးနီးယားတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ရှာဖွေနေပါကသင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည် -
အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယားတွင်ရှိသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊
Million Makers Armenia သည်ဖောက်သည်များအားအာမေးနီးယားနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံအတွက်အခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းကိုပေးသည်။
အာမေးနီးယားရှိကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားမှကမ်းလွန်ဒေသများနှင့်လွတ်လပ်သောဇုန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။
အာမေးနီးယားတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများပေးပို့ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ (အမိန့်ပေးလျှင်) ။
သင်၏အာမေးနီးယားနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်သင်၏တစ်နေရာတည်း၌ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။
အာမေးနီးယားအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားအတွက်ဘဏ်အကောင့်၊ အာမေးနီးယားအတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ အာမေးနီးယားအတွက် Virtual နံပါတ်၊ အာမေးနီးယားအတွက် CRM Solutions၊ အာမေးနီးယားအတွက်ရုံးခွဲ၊ အာမေးနီးယားအတွက်လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် 109 နိုင်ငံများနှင့်အများကြီးပို။
သင်၏အာမေးနီးယား LLC အမည်ကိုယနေ့ရယူပါ
Your Armenia LLC အမည်ရှာပါ
မျက်မှောက်ခေတ်အာမေးနီးယားတွင်အာမေးနီးယားနိုင်ငံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမျှသာပါ ၀ င်ပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်ရာသီဥတုအရှိဆုံးတိုးတက်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အာမေးနီးယား၏မှားယွင်းသောဒေသ၏ထင်ရှားသောဒေသတစ်ခုမှာအာရရတ်လွင်ပြင်နှင့်၎င်း၏နိမ့်ကျသောဒေသများနှင့်တောင်တန်းများဖြစ်သည်။ ဤသာယာဝပြောသောလူ ဦး ရေထူထပ်သောဒေသသည်အာမေးနီးယား၏စီးပွားရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု၏အဓိကအချက်အချာဖြစ်ပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ဥပဒေပြုရေးရာထူထောင်မှုနေရာဖြစ်သည်။ ဆိုဗီယက်နိယာမအရအာမေးနီးယားစီးပွားရေးသည်ဟော်ရီကာချာမှခေတ်သစ်သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသည်သိသာထင်ရှားဆဲဖြစ်သည်။ ဂျီဒီပီ၏ငါးပုံနှစ်ပုံခန့်ကိုကိုယ်စားပြုပြီးလုပ်သားအင်အား၏ငါးပုံတစ်ပုံကိုအသုံးပြုသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသည်စွမ်းအင်နှင့်ရေနံစိမ်းများတင်သွင်းမှုကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်သည်။ နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ဈေးကစားသူများသည်ငွေကြေးအပြောင်းအလဲများ၏လှုပ်ရှားမှု၊ အာမေးနီးယား၏လုံခြုံရေး၊ အခွင့်အလမ်းနှင့်လက်ခံမှုတို့ကိုတန်ဖိုးထားကြသည်။ လူအများတို့သည်အာမေးနီးယားသို့မျက်နှာချင်းဆိုင်သွားရောက်ပြီးစျေးကွက်ထဲ ၀ င်ရန်အစပြုသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်စာရင်းသွင်းချင်ကြသည်။
သင်အာမေးနီးယားတွင်အမှန်တကယ်ရှိနေပြီးစမ်းသပ်မှုများအပ်နှံထားသည့်မော်ကွန်းတိုက်ကိုအသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်ပါကတစ် ဦး တည်းနေသည့်နေ့တွင်အဖွဲ့အစည်းစာရင်းသွင်းနိုင်သည်။ မှတ်တမ်းများပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောသို့မဟုတ်ဝေးလံသော (ရှေ့နေတစ် ဦး ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူ) ဝေးလံသောစစ်သားစုဆောင်းရေးတစ်ခုဖြစ်ပွားမှုပေါ်ပေါက်သင့်တယ်ဆိုပါကသံသရာတစ် ဦး ကနေသုံးစီးပွားရေးရက်ပေါင်းကြာပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ္financialာရေးချိန်ခွင်လျှာကိုသတ်မှတ်ခြင်းသည်တစ်ရက်သာကြာသည်။ အနည်းဆုံးမှတ်တမ်းများလိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်အကြီးအကဲများ၏နိုင်ငံတကာမှတ်ပုံတင်လိုအပ်သည်။ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်နံပါတ်ပါသောစာရင်းသွင်းမှုကြေငြာချက်တစ်ခုကိုသင်ရလိမ့်မည်။ ချက်ချင်းအလုပ်လုပ်ရန်ပြင်ဆင်ထားသည်။
အဘယ်သူမျှမအခြေစိုက်စခန်းမြို့တော်လိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်း၏အခြေချအရင်းအနှီးသည်ဒေါ်လာ ၁ ဒေါ်လာအထိကျနိုင်သည်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏စာရင်းသွင်းခြင်းကိုအားဖြည့်ရန်သို့မဟုတ်အားသွင်းရန်အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးစရိတ်မရှိပါ။ အစီရင်ခံစာသည်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်များကိုထပ်မံမပေးဆောင်ဘဲအဖွဲ့အစည်းသည်အဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်သည် Inert (torpid) အဖွဲ့အစည်းများသည်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘဲအကဲဖြတ်ပုံစံများကိုမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိပါ။ ရုံးခန်းငှားရမ်းရန်၊ အနီးအနားရှိလူပုဂ္ဂိုလ်များ (အကြီးအကဲများ၊ အရာရှိများ၊ အတွင်းရေးမှူးများ၊ စာရင်းကိုင်များစသဖြင့်)၊ လယ်ဂျာဖွင့်လှစ်ခြင်းစသည်တို့အတွက်မလိုအပ်ပါ။
အပြင်လူများကအာမေးနီးယားအဖွဲ့အစည်း၏ ၁၀၀% ကိုတောင်းဆိုနိုင်သည်။ အာမေးနီးယားအဖွဲ့အစည်းမှအကြီးအကဲများနှင့်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးသည်အပြင်လူများဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့သည်အာမေးနီးယားတွင်နေထိုင်ရန်သို့မဟုတ်လူနေအိမ်areaရိယာရှိရန်မလိုအပ်ပါ။ အပြင်လူတစ် ဦး သည်အဓိကအကြီးအကဲနှင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ ၁၀၀% ပိုင်ရှင်ဖြစ်နိုင်သည်။
အာမေးနီးယားရှိလုပ်ငန်းလည်ပတ်သည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့်ပြောဆိုခြင်းသို့မဟုတ်ဆက်ဆံခြင်းသည်သင်နှင့်သင်၏ဆွေမျိုးများနေထိုင်ရာအခြေအနေ (အတိုချုပ်၊ ရေရှည်သို့မဟုတ်ထူးခြားသော) အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီနိုင်သည်။ ၀ န်ကြီးချုပ်အားနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြင့်တောင်းဆိုနိုင်သည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သဘာဝကျကျစီမံခန့်ခွဲမှုလက်အောက်တွင်သုံးနှစ်နေထိုင်ပြီးနောက်တွင်အပြင်လူတစ် ဦး သည်အာမေးနီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်ရန်အရည်အချင်းပြည့်မှီနိုင်သည်။
အသေးစားအဖွဲ့အစည်းများ၊ အိုင်တီဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်များ၊ အခမဲ့ဘဏ္zonesာရေးဇုန်များ၊ ခေတ်မီဇုန်များ၊ နယ်စပ်မြို့များနှင့်မြို့များတွင်လုပ်ကိုင်နေသောအဖွဲ့အစည်းများအတွက်သုည - တာဝန်ခံအခြေအနေကိုရရှိနိုင်သည်။ နှစ်စဉ်ကန်ဒေါ်လာ ၂၄၀,၀၀၀ အောက်ရှိသောအခြားလွတ်လပ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ၁.၅ မှ ၅ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသောကုန်သွယ်ရေး (လည်ပတ်ငွေကြေး) စရိတ်အပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အမြတ်အစွန်းအားဖြင့် ၅% နှုန်းဖြင့်ကောက်ခံသည်။ သို့သော်အာမေးနီးယားမှသတ်မှတ်ထားသောကုန်ကျစရိတ်နှစ်ဆရှိသောကြောင့်ဤနှုန်းသည်နိမ့်ကျနိုင်သည်။ ကာကွယ်မှုနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များကိုအရစ်ကျပေးချေမှုမှကင်းလွတ်သည်။ ပဒေသာပင်များ၊ စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုများစသည်ဖြင့်စရိတ်စကမကောက်ခံပါ
အခွင့်ထူးခံကော်ပိုရိတ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်သို့မဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအုပ်ချုပ်ရေးကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အဖွဲ့အစည်းပိုင်ဆိုင်မှု၏လုံခြုံမှုကိုအာမခံနိုင်သည်။ ဘဏ်၏လျှို့ဝှက်နက်နဲရာကိုဥပဒေအရသေချာစွာသေချာစွာစစ်ဆေးထားပြီး၎င်းကိုဖွင့်ပြခြင်းသည်မှားယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှ စ၍ အာမေးနီးယားသည် CRS အစီအစဉ်၏အချက်အလက်ကုန်သွယ်မှု (AEOI) တွင်မပါ ၀ င်ပါ။ အာမေးနီးယားသည်၎င်း၏အပြုသဘောဆောင်သည့်ပုံရိပ်နှင့်ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ချေးငှားခြင်း၊ တရားမ ၀ င်အခွန်ရှောင်ရှားခြင်းဥပဒေကိုဆန့်ကျင်။ နိုင်ငံတော်သည်ရှေ့ရှုစဉ်း စား၍ ဗဟိုဘဏ်သည်ဘဏ္frameworkာရေးမူဘောင်၏လုံခြုံရေး၊ ခွန်အားနှင့်ကြီးမားသောရပ်တည်မှုကိုအာမခံထားသည်။
အာမေးနီးယားတွင်ထူးချွန်စွာသင်ကြားပို့ချခြင်း၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသောပညာရေးနှုန်းသည် ၉၉.၇% ဖြစ်သည်။ ရုရှား၊ အင်္ဂလိပ်နှင့်ပြင်သစ်ဘာသာရပ်များရှိကောလိပ်များကို Yerevan တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ တစ်နေ့လုံးအတွက်တစ်လမှတစ်လလျော်ကြေးငွေဒေါ်လာ ၁၄၀ ဖြစ်ပြီး၊ တစ်လမှတစ်လလုပ်အားခသည်ဒေါ်လာ ၃၈၀ ဖြစ်သည်။
2019 တွင်အာမေးနီးယား၏ဂျီဒီပီသည် ၇.၆% ဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးဥရောပတစ်ခွင်လုံးတွင်အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သည်။ အာမေးနီးယားသည်ရုရှားမောင်းနှင်သောငွေကြေးဆိုင်ရာစတုရန်းမိုင်ဖြစ်သည်။ ယူရိုအက်ရှားစီးပွါးရေးသမဂ္ဂ (EEU) မှတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးလူ ဦး ရေသန်း ၁၈၀ ၏တစ် ဦး တည်းသောစျေးကွက်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အာမေးနီးယားသည် WTO မှပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးဆိုဗီယက်ဟောင်း (CIS) နိုင်ငံများနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမဟာမိတ်များရှိပြီးအီးယူ၊ ကနေဒါ၊ ဂျပန်၊ နော်ဝေးနှင့်ဆွစ်ဇာလန်တို့နှင့်အထူးအဆင့်အတန်း (GSP) မှအကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်။ အာမေးနီးယားနိုင်ငံရှိလူ ဦး ရေစုစုပေါင်း၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသောအာမေးနီးယားရှိလူများနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများကြောင့်အမြတ်အစွန်းရရှိသည်။
Venture Friendly ပတ်ဝန်းကျင်
အာမေးနီးယားသည်လှူဒါန်းသောအရင်းအနှီးနှင့်အကျိုးအမြတ်များကိုအိမ်သို့အခမဲ့ယူဆောင်လာစေသည် နိုင်ငံခြားသားများကိုမြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အကျိုးတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအခွန်လျှော့ချခြင်းနှင့်အစိုးရ၏အကူအညီပေးရေးအစီအစဉ်များဖြင့်အားဖြည့်ထားသည်။ အာမေးနီးယားတွင်အခွန်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိသောထင်မြင်ချက်များ၏လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်မျိုးပေါင်းစည်းညီညွတ်မှုများစွာရှိသည်။
အာမေးနီးယားနိုင်ငံ၏လုပ်သားအင်အားသည်အခြေခံအကျဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်လက်တွေ့နှင့်သာယာဝပြောရေး၊ သိပ္ပံ၊ တီထွင်မှု၊ ဒီဇိုင်းနှင့်ဂဏန်းသင်္ချာတို့တွင်လုပ်သားအင်အားသည်ကျွမ်းကျင်သည်။ အာမေးနီးယားလူ ဦး ရေ၏ ၁၀၀% သည်ကျွမ်းကျင်ကြသည်။
အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန် - အာမေးနီးယားတွင်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ အာမေးနီးယားတွင်စီးပွားရေးစတင်ခြင်းနှင့်အာမေးနီးယားသို့မဟုတ်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့တွင်တည်ထောင်သည့်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အာမေးနီးယားရှိ Company Incorporation ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်အာမေးနီးယားရှိကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဖြေများကိုအဆုံးသတ်ရန်နှင့်အာမေးနီးယားတွင်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုငှားရမ်းရန်လည်းကူညီသည်။ အာမေးနီးယားရှိစီးပွားရေးဆိုင်ရာ ၀ ယ်ယူမှုများ၊ အာမေးနီးယားရှိ virtual နံပါတ်၊ အာမေးနီးယားတွင်စီးပွားရေးတိုးချဲ့ခြင်း၊ အာမေးနီးယားတွင်တရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အာမေးနီးယားတွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ အာမေးနီးယားတွင်စီးပွားရေးအကဲဖြတ်ခြင်း၊ အာမေးနီးယားရှိ CRM Solutions၊ အာမေးနီးယားကုန်သည်အကောင့်၊ သင့်လျော်သောလုံ့လဝီရိယရှိခြင်းနှင့်လိုက်နာခြင်း၊ အာမေးနီးယားတွင်အိုင်တီနည်းပညာဖြင့်ဖြေရှင်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားတွင် Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အာမေးနီးယားရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အာမေးနီးယားရှိအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အာမေးနီးယားရှိအက်ပ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊
အာမေးနီးယားတွင်တည်ထောင်ထားသည့်ကုမ္ပဏီများအတွက် - အာမေးနီးယားနှင့် Offshore ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အာမေးနီးယားမှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်များအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံရှိအဆုံးမှအဆုံးအဖြေများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးပေးသည်။ ထို့အပြင်အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ၀ န်ထမ်းများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောကျွမ်းကျင်မှုရှိသော ၀ န်ထမ်းများအားအာမေးနီးယားတွင်အလုပ်ဖြည့်ရန်၊ အာမေးနီးယားရှိစီးပွားရေးရောင်းဝယ်မှုနှင့်အရောင်းအဝယ်၊ အာမေးနီးယားတွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယားရှိ virtual နံပါတ်များ၊ အာမေးနီးယားတွင်နိုင်ငံတကာတိုးချဲ့ခြင်း၊ အာမေးနီးယားရှိတရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှု၊ အာမေးနီးယားရှိစီးပွားရေးအတွက်စီးပွားရေးအကဲဖြတ်ခြင်း၊ အာမေးနီးယားတွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ အာမေးနီးယားရှိ CRM Solutions၊ Merchant account နှင့် payment gateway အာမေးနီးယားတွင်စက်ပစ္စည်းများငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်အာမေးနီးယားတွင်လည်ပတ်ငွေကြေးအရင်းအနှီးရန်ပုံငွေ၊ အာမေးနီးယားတွင်လုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိခြင်းနှင့်လိုက်နာမှု၊ အာမေးနီးယားရှိအိုင်တီဖြေရှင်းနည်းများ၊ အာမေးနီးယားရှိ Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အာမေးနီးယားရှိအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အာမေးနီးယားတွင်အက်ပ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ နှင့်အလွန်ယှဉ်ပြိုင်မှုမှာအနည်းငယ်အမည်ကိုရန်အာမေးနီးယားအတွက် Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စျေးနှုန်းများ။
အာမေးနီးယားရှိ LLC အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်
အာမေးနီးယားအတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ အာမေးနီးယားအတွက်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု
“ Million Makers မှာကျွန်တော်တို့ဟာအာမေးနီးယားနဲ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်မှတောင်မှကမ်းလှမ်းထားသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံမှာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးကိုပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအဖြေတွေကိုအဆုံးစွန်ပေးနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာအကြီးမားဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲကတစ်ယောက်လို့ပြောရင်မှန်တယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားကူညီသည်။ စီးပွားရေးအတိုင်းအတာအရအာမေးနီးယားတွင်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ WE အာမေးနီးယားအတွက်အဖြေတစ်ခုပေးသည်။
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း အာမေးနီးယား (၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း အာမေးနီးယား (နှစ် ၂ နှစ်)
အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခအတွက်ကျသင့်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း အာမေးနီးယား
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း အာမေးနီးယား
အာမေးနီးယားစီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ ဝန်ဆောင်မှုကြေး
အာမေးနီးယားကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
အာမေးနီးယားရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
စီးပွားရေးကုမ္မဏီအာမေးနီးယားအတွက်ကုမ္ပဏီ Chop and Seal
အာမေးနီးယားရှိ LLC အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ
●အာမေးနီးယား LLC အတွက်ဝန်ဆောင်ခ (၁ နှစ်) - ဒေါ်လာ ၁၀၀
●အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်မှုခ - ဒေါ်လာ
●အမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (ကျေးဇူးပြု၍ အာမေးနီးယားတွင် Company TYPE3ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအမည် ၃ ခုပေးပါ။ )
●အာမေးနီးယားတွင် LLC အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်တင်သွင်းခြင်း
●အာမေးနီးယားတွင် LLC အတွက်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအခွန်ပေးဆောင်မှု
●အာမေးနီးယားရှိ LLC အတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်နှင့်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့လိပ်စာကိုတစ်နှစ်ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
●အာမေးနီးယားရှိ LLC အတွက်ကုမ္ပဏီအတွင်းရေးမှူးတစ်ယောက်ကိုတစ်နှစ်ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
●အာမေးနီးယားရှိသင်၏ for LLC အတွက်သင့်အတွက်ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများကိုဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ၎င်းတွင်အသင်းဝင်စာချွန်လွှာများ၊ အသင်း ၀ င်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ ရှယ်ယာလက်မှတ်၊ ပထမဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်း၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
အာမေးနီးယားတွင်စီးပွားရေးစတင်ရန်၊ ဒေသအရင်းအမြစ်များကိုသင်နှင့်နီးစပ်စေရန်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသည်။ သင်အာမေးနီးယားသို့မဟုတ်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်လိုပါကအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုကိုသင်ရှာနိုင်သည်။
အာမေးနီးယားရှိ LLC အတွက်တာဝန်ခံဒါရိုက်တာ
LLC အာမေးနီးယားအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ Million Makers မှတဆင့်အာမေးနီးယား၌တည်၏
အကယ်၍ သင်သည်အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အာမေးနီးယားကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကိုမည်သို့မည်ပုံမှတ်ပုံတင်မည်ကိုရှင်းလင်းစွာ၊ အာမေးနီးယားရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်အာမေးနီးယားတွင်ကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အာမေးနီးယားရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ အာမေးနီးယားအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၏နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ယက်နှင့်အာမေးနီးယား၌ရှိသောဖောက်သည်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အာမေးနီးယားတွင်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်သင်ဖွဲ့စည်းထားသောကုမ္ပဏီများအတွက်အာမေးနီးယားမှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုလိုအပ်ပါကကူညီပေးပါမည် အာမေးနီးယား၊ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုအာမေးနီးယားတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ သင်နှင့်သင်တို့၏မိသားစုဝင်များအတွက်အာမေးနီးယားအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုသင်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်လျှောက်ထားလိုပါကအာမေးနီးယားအတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သောအကူအညီများပါ ၀ င်သည်။ အဘို့ အာမေးနီးယားတွင်နေထိုင်ခွင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏အာမေးနီးယားရှိလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများသည်အာမေးနီးယားရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသောဖောက်သည်များအား“ ၁ နာရီအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး” ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ အာမေးနီးယား ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် အာမေးနီးယား.
အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အာမေးနီးယားရှိကုမ္ပဏီ Incoporation နှင့်အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
ကျွန်ုပ်တို့သည်အာမေးနီးယား၌ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောလည်ပတ်မှုကြောင့်အာမေးနီးယားတွင်တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်။ အာမေးနီးယားရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ အာမေးနီးယားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊
အာမေးနီးယားတွင် LLC အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများမှတ်ပုံတင်ခြင်း
Million Makers တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အာမေးနီးယားအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှပင်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအမြောက်အများကိုပေးစွမ်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အာမေးနီးယားနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးအဖြေရှာမှုများကိုအစမှအဆုံးတိုင်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုဆိုလျှင်မှန်ကန်ပေလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်“ အာမေးနီးယားရှိအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ” ကိုအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးသည်။
အာမေးနီးယားရှိ LLC အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှု / အာမေးနီးယားရှိလီမိတက်လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက် -
အာမေးနီးယားရှိ LLC အတွက်အသင်းဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာစာချွန်လွှာများနှင့်အာမေးနီးယားရှိလီမိတက်တာဝန်ခံကုမ္ပဏီ။
အာမေးနီးယားရှိ LLC အတွက်ရှယ်ယာခွဲဝေခြင်း / အာမေးနီးယားရှိလီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏လက်မှတ်စာအုပ်။
အာမေးနီးယားတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်အာမေးနီးယား / လီမိတက်လီမိတက်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော LLC အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်။ အာမေးနီးယားရှိ LLC ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်ပါက၊ အာမေးနီးယားရှိလီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်။
မှတ်ပုံတင်ရုံး, မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်မယ်ဆိုရင်, အာမေးနီးယားအတွက် LLC / အာမေးနီးယားအတွက်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ။
အာမေးနီးယားတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ / အာမေးနီးယားတွင်အကန့်အသတ်ရှိသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ အာမေးနီးယားရှိ LLC / အာမေးနီးယားရှိလီမိတက်တာဝန်ယူမှုဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ:
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: အကယ်၍ သင်သည်အာမေးနီးယားတွင်လိုင်စင်မလိုပဲလုပ်ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကခွင့်ပြုခြင်းကိုအာမေးနီးယားတွင်ခွင့်ပြုချက်ပြုခြင်းဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သန်းခေါင်စာရင်းပြုလုပ်သူများမှကျွန်ုပ်တို့သည်အာမေးနီးယားတွင်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင်လိုင်စင်မပါသောလုပ်ဆောင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင့်အားကူညီနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်ကစားခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်း၊ အာမေးနီးယားတွင်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ခြင်းနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ခြင်း၊ အာမေးနီးယားရှိဘဏ်လုပ်ငန်း၊ အာမေးနီးယားရှိအာမခံလုပ်ငန်း၊ ဘဏ္Armeniaာရေးနှင့်ကုန်စည်ကိုအခြေခံသောအနကျအဓိပ်ပါယျတူရိယာများနှင့်အာမေးနီးယားရှိအခြားငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ၊ အာမေးနီးယားရှိအခြားငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ၊ အာမေးနီးယားတွင်လဲလှယ်ခြင်း၊
အာမေးနီးယားရှိ Crytocurrency လိုင်စင်၊ Forex အကျိုးဆောင်သို့မဟုတ်လောင်းကစားလိုင်စင်ကိုလိုင်စင်ချထားပေးရန်အကူအညီလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
အာမေးနီးယားနှင့် "အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအမေရိကန် ၅၀ အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ" ၌ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်းအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ။
သန်းနှင့်ချီသောထုတ်လုပ်သူများအာမေးနီးယားတွင်သာမကကျွန်ုပ်တို့၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များနှင့်အာမေးနီးယားရှိ Professional CFA နှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ အာမေးနီးယားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊
အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အာမေးနီးယားနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းတို့ဖြင့်ဖောက်သည်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။
အာမေးနီးယားရှိ Corporate Services | Yerevan ရှိ Corporate Services
အာမေးနီးယားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အာမေးနီးယားရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အာမေးနီးယားရှိကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ၊ အာမေးနီးယားတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အာမေးနီးယားတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအကြံပေးများ၊ အာမေးနီးယားရှိ Offshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အာမေးနီးယားရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အာမေးနီးယားရှိ Offshore Company တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊
အာမေးနီးယားရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံ | Yerevan ရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံ
အာမေးနီးယားနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြု ၀ န်ဆောင်မှုများ
သင်၏ကုမ္ပဏီအာမေးနီးယားတွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် အာမေးနီးယား.
Accounts Outsourcing (အာမေးနီးယား)
သင့်ကုမ္ပဏီကိုသင်အာမေးနီးယားနိုင်ငံတွင်သင်ပေါင်းစည်းနိုင်သည် စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို အာမေးနီးယားမှာ။
HR အတိုင်ပင်ခံ အာမေးနီးယားတွင်ထောက်ပံ့မှုသည်သင်၏ ၀ န်ထုပ် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အာမေးနီးယားတွင်စုဆောင်းမှုတို့၏ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးများကိုလျှော့ချနိုင်သည်
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ အာမေးနီးယားတွင်အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီ အာမေးနီးယားနှင့်အမေရိကန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၇ နိုင်ငံမှာ“အသက်ကော်ပိုရေးရှင်းအာမေးနီးယား၌တည်၏
အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်၌အခြားဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ အာမေးနီးယား.
အာမေးနီးယားရှိ Cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် ကမ်းလွန်သို့မဟုတ် EU တရားစီရင်မှုများအတွက်အာမေးနီးယားကနေ။
အာမေးနီးယားရှိ CRM Solutions
CRM ဆော့ဝဲ သင်၏အာမေးနီးယားရှိသင်၏ဖောက်သည်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အထောက်အပံ့ကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်နိုင်စေရန်ကူညီသည်။
Virtual Number - အာမေးနီးယားအတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် အာမေးနီးယားရှိစီးပွားရေး VoIP အပါအဝင်အာမေးနီးယားရှိအခြား VoIP ဖြေရှင်းချက်များအာမေးနီးယားရှိလူနေအိမ် VoIP ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်လွှာ ၁ ခုသာရှိသောအာမေးနီးယားနိုင်ငံမှ ၁၁၉ နိုင်ငံအတွက်
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း အာမေးနီးယား အာမေးနီးယားတွင်ထည့်သွင်းထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ $ 100 နှင့်အတူစတင်
အာမေးနီးယားရှိ Software Development ကုမ္ပဏီ
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အာမေးနီးယားအာမေးနီးယားရှိ CryptoCurrency Software များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အာမေးနီးယားရှိ App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
စျေးနှုန်းချိုသာသော software ကိုအာမေးနီးယားတွင်တည်ဆောက်သည် အာမေးနီးယားရှိစျေးသက်သာသောအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပိုင်ရှင်များ၊ ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်အာမေးနီးယားတွင်အမြန်ဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုနှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းများနှင့်ပူးပေါင်းရန်ပါ ၀ င်သောအာမေးနီးယား၏တိကျသောဖြစ်စဉ်များကိုလျင်မြန်စွာလိုက်နာရန်အတွက်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၊ အာမေးနီးယားရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖောက်သည်၏ကြိုက်နှစ်သက်သောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည့်နေရာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝမှုနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှအဘယ်သို့နှင့်သူတို့ကိုမကူညီနိုင်သည့်အရာများအပေါ်ရိုးသားမှုကြောင့်အာမေးနီးယားတွင်သူတို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချသည်။
အာမေးနီးယားတွင်နေထိုင်သူများနှင့်အာမေးနီးယားတွင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများအားလည်းအာမေးနီးယားတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယားတွင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားတွင်အခြေစိုက်သော LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားတွင်အခြေစိုက်သော LLC မှဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယား LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယား LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယား LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
အာမေးနီးယားတွင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ထောက်ပံ့မှု | လီမိတက်မှလီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီ အာမေးနီးယားတွင် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း အာမေးနီးယားတွင်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း အာမေးနီးယားတွင်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | အာမေးနီးယားတွင် IC ပါဝင်မှု အာမေးနီးယားတွင် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | အာမေးနီးယားတွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်အာမေးနီးယားတွင်နေထိုင်သူများနှင့်အာမေးနီးယားတွင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့်ဖွဲ့စည်းထားသောနိုင်ငံခြားသားများကိုလည်းအာမေးနီးယားတွင်လီမိတက်လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယားတွင်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ အာမေးနီးယားရှိကမ်းလွန်လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားတွင်၊ ကမ်းလွန်လီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသောကုမ္ပဏီ၊ အာမေးနီးယားတွင်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားလီမိတက်လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ အာမေးနီးယားလီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊
အာမေးနီးယားတွင်နေထိုင်သူများနှင့်အာမေးနီးယားတွင် IBC ဖွဲ့စည်းမှုရှိသောနိုင်ငံခြားသားများကိုလည်းအာမေးနီးယားတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယားတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယားတွင် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားရှိ IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယားတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယား IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယား IBC မှတ်ပုံတင်၊ အာမေးနီးယား IBC မှတ်ပုံတင်၊ အာမေးနီးယားကမ်းလွန် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားကမ်းလွန် IBC မှတ်ပုံတင်။
အာမေးနီးယားတွင်နေထိုင်သူများနှင့်အာမေးနီးယားတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုအာမေးနီးယားတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယားတွင်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားရှိကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားတွင်၊ ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီကိုအာမေးနီးယားတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
အာမေးနီးယားတွင်နေထိုင်သူများနှင့်အာမေးနီးယားတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်သည့်နိုင်ငံခြားသားများကိုအာမေးနီးယားတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယားတွင်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားရှိနိုင်ငံတကာကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားရှိနိုင်ငံတကာကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယားကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
အာမေးနီးယားတွင်နေထိုင်သူများနှင့်အာမေးနီးယားတွင် IC ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများအားလည်းအာမေးနီးယားတွင် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယားတွင် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယားရှိကမ်းလွန် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယားရှိကမ်းလွန် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယားအိုင်စီတီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားအိုင်အက်စ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယားအိုင်စီတီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားကမ်းလွန်အိုင်ဖွဲ့စည်းမှု၊ အာမေးနီးယားကမ်းလွန်အိုင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
အာမေးနီးယားတွင်နေထိုင်သူများနှင့်အာမေးနီးယားတွင် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။ အာမေးနီးယားတွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယားရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားရှိ Offshore LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယား LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယား LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယား LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားကမ်းလွန် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
အာမေးနီးယားတွင်နေထိုင်သူများနှင့်အာမေးနီးယားတွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်သောနိုင်ငံခြားသားများအားလည်းထောက်ခံသည်။ ၎င်းသည်အာမေးနီးယားတွင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယားတွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယား IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယား IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားကမ်းလွန် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားကမ်းလွန် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
အာမေးနီးယားတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ပါ အာမေးနီးယားရှိလီမိတက်တာဝန်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း IBC ကိုအာမေးနီးယားတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ အာမေးနီးယားရှိနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း အာမေးနီးယားတွင်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မည် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်းအာမေးနီးယား | အာမေးနီးယားတွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပါ IBC Company ကိုအာမေးနီးယားတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ
အမေးများသောမေးခွန်းများ - အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယားမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အာမေးနီးယားမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ အာမေးနီးယားမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။ အာမေးနီးယားတွင်ထောက်ခံမှုများမှာ - အဲရီဗန်၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Yerevan ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ere ရevanတွင်ရှိသောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊
အာမေးနီးယားတွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | Yerevan တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအာမေးနီးယားရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၏ထောက်ခံမှုဖြင့်အာမေးနီးယားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အာမေးနီးယားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်များမှအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့ပြီး Yerevan ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များ၊ Yerevan ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Yerevan ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များ၊ Yerevan ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Yerevan ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ။
အာမေးနီးယားတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ Yerevan ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ
သင်အာမေးနီးယားတွင်တတ်နိုင်သည့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးပါသလား။
ဟုတ်တယ်အာမေးနီးယားတွင်ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အာမေးနီးယားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ Yerevan ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Yerevan ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ Yerevan ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ Yerevan ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊
အာမေးနီးယားတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Yerevan တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု
အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသလား။
အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်၊ အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်၊ အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Yerevan တွင် Yerevan ၌မှတ်ပုံတင်ပါ။ Yerevan တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုပါ ၀ င်ပါ။ Yerevan ရှိ Setup ကုမ္ပဏီ၊ Yerevan ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတည်ထောင်ပါ။
အာမေးနီးယားတွင်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ Yerevan ရှိတန်ဖိုးနည်းကုမ္ပဏ်ီပိုင် ၀ န်ဆောင်မှု
အာမေးနီးယားတွင်နေထိုင်သူများမဟုတ်သည့်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယားတွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အာမေးနီးယားတွင်ဘဏ်စာရင်းဖြင့်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့အပါအ ၀ င်နိုင်ငံခြားသားအားမြို့တော်၌လည်း၊ မြို့တော်၌လည်း၊ အီးရီဗန်တွင်နေထိုင်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Yerevan ရှိနိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်၊ ဘဏ်အကောင့်ရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက် Yerevan တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအာမေးနီးယား | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Yerevan
အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်အာမေးနီးယားတွင်အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကုန်ကျမှု၊ အာမေးနီးယားတွင်မှတ်ပုံတင်ခအခကြေးငွေအာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကုန်ကျမှုအာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စရိတ်၊ ဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ်အာမေးနီးယားတွင်, ကုမ္ဗဏီအာမေးနီးယားတွင်ကုန်ကျခဲ့သည်
စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေးအာမေးနီးယား | စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး
ကျွန်ုပ်သည်အာမေးနီးယားတွင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် (သို့) အာမေးနီးယားတွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း။
အာမေးနီးယားတွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးစတင်ရန် (သို့) အာမေးနီးယားတွင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် (သို့) အာမေးနီးယားတွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်အာမေးနီးယားတွင်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များရှိသည်။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
အာမေးနီးယားတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ Yerevan တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ
အာမေးနီးယားတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား လီမိတက်နိုင်ငံမှလီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | အာမေးနီးယားတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း အာမေးနီးယားတွင်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း အာမေးနီးယားတွင်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း အာမေးနီးယားတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း အာမေးနီးယားတွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း IBC အာမေးနီးယားတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလော
အာမေးနီးယားရှိ LLC Incorporate | အာမေးနီးယားရှိလီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီ IBC ကိုအာမေးနီးယားတွင်ထည့်သွင်းပါ အာမေးနီးယားရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထည့်သွင်းပါ အာမေးနီးယားရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီိ IC ကိုအာမေးနီးယားတွင်ထည့်သွင်းပါ အာမေးနီးယားရှိကုမ္ပဏီလီမိတက် အာမေးနီးယားတွင် IBC ကုမ္ပဏီကိုထည့်သွင်းပါ
အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း (သို့) အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းတို့အကြားကွာခြားမှုမရှိကြောင်းအသုံးပြုသူများကမေးလေ့ရှိသောဤအခြေခံမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်၎င်းတို့သည်အာမေးနီးယားရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုပေါင်းစည်းသည့်ကုမ္ပဏီအတွက်အသုံးပြုသောစကားလုံးများဖြစ်သည်။
အာမေးနီးယားရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစု ၀ န်ဆောင်မှုများ အာမေးနီးယားရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု အာမေးနီးယားတွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ
သင်၏အမ်ဘာနီတွင်သင်၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်အာမေးနီးယားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုသင့်သနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အာမေးနီးယားရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုထူးချွန်မှုများစွာကိုထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ အာမေးနီးယားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများနှင့်အာမေးနီးယားရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းစာရင်းအင်းအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုစာရင်းအင်းများကြောင့်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ အာမေးနီးယားတွင်အာမေးနီးယားရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတိုင်ပင်ခံများကသင့်အားအာမေးနီးယားတွင်စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ | အာမေးနီးယားရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ | အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ
နေထိုင်သူများမဟုတ်သောနိုင်ငံခြားသားများအတွက်အာမေးနီးယားရှိအထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်အထူးအထောက်အပံ့များကို Yerevan တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။ သင်ဟာနိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအာမေးနီးယားမှာကုမ္ပဏီဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊
အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါကသို့မဟုတ်အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ အာမေးနီးယားတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ပါ။ အလားတူအာမေးနီးယားတွင်လည်း Yerevan တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Yerevan တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန် (သို့) Yerevan တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် (သို့မဟုတ်) Yerevan ရှိကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန် (သို့) Yerevan တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်၊ Yerevan တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Yerevan ။
အာမေးနီးယားတွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Yerevan ရှိစျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
အာမေးနီးယားကာကွယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန
အာမေးနီးယားပြည်သူ့ ၀ န်ဆောင်မှုများစည်းမျဉ်းဥပဒေကော်မရှင်
အာရပ် - ံနိုင်ငံ - နိုင်ငံလမ်းညွှန်များ
Armeniapedia - အွန်လိုင်းအာမေးနီးယားစွယ်စုံကျမ်း
The World Factbook - အာမေးနီးယား
ဘီဘီစီနိုင်ငံ၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်း - အာမေးနီးယား
Freedom House: အာမေးနီးယား
“ HSBC Bank Armenia” CJSC
“ ACBA-KREDIT AGRICOLE BANK” CJSC
“ ID ဘဏ်” ကုမ္ပဏီ၊
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်အာမေးနီးယားရှိငွေကြေးခ ၀ ါချမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုလုံး ၀ ဆန့်ကျင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောလူများကိုကျွန်ုပ်တို့မထောက်ခံပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ အာမေးနီးယား အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
●အာမေးနီးယားအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူ၊ လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊
●အာမေးနီးယားအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းခိုးယူခြင်းများအတွက်သို့မဟုတ်အာမေးနီးယားမှသို့မဟုတ်သို့သွားသောစက်မှုလုပ်ငန်းသူလျှိုများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးမှုမရှိပါ။
●အာမေးနီးယားအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုတရားမ ၀ င်ရာဇ ၀ တ်မှုသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်အာမေးနီးယားဥပဒေအောက်တွင်လူမည်းစာရင်းသွင်းထားသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●အာမေးနီးယားအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုအာမေးနီးယားမှသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်မျိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●အာမေးနီးယားအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အာမေးနီးယားတွင်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာနှင့်သက်ဆိုင်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ဓာတုပစ္စည်းများသည်အာမေးနီးယားမှသို့မဟုတ်အာမေးနီးယားမှသို့မဟုတ်အာမေးနီးယားမှနျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်နျူကလီးယားပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသောစက်ယန္တရားများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများအားပေးအပ်ခြင်းမပြုပါ။ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်း။
●အာမေးနီးယားအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်များအားကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်မဆိုအာမေးနီးယားရှိသို့မဟုတ်မှသို့မဟုတ်သို့အာမေးနီးယားသို့သွားသောလူပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●အာမေးနီးယားအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မွေးစားခြင်းအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါ၊ အငြင်းပွားဖွယ်မိဘအုပ်ထိန်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့မဟုတ်အာမေးနီးယားနိုင်ငံမှသို့မဟုတ်အာမေးနီးယားသို့လူ့အခွင့်အရေးအလွဲသုံးစားမှုပုံစံများအပါအ ၀ င်။
●အာမေးနီးယားအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဘာသာရေးသာသနာရေးနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများကိုအာမေးနီးယားမှ (သို့) ၀ င်ခွင့်သို့ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●အာမေးနီးယားအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းစာပေအခြေခံသည့်အာမေးနီးယားတွင်အလုပ်လုပ်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●အာမေးနီးယားအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည် Pyramid အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ကိုင်နေသည့်အာမေးနီးယားရှိသို့မဟုတ်မှသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်တစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●အာမေးနီးယားအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နေသည့်အာမေးနီးယားရှိသို့မဟုတ်မှသို့မဟုတ်သို့ ၀ င်ရောက်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် အာမေးနီးယားတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် အာမေးနီးယား, အာမေးနီးယား ဘဏ်အကောင့်, အာမေးနီးယား ယုံကြည်မှု အာမေးနီးယား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု အာမေးနီးယား။ "
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ အာမေးနီးယားအတွက်
အသုံးပြုသူသည် https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-armenia/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။
အသုံးပြုသူသည် https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-armenia/ မှသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့လာသည်။
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-armenia/